Warar Dheeraad ah oo Aan ka Helay Dilkii Cabdi Cabdulahi Muxumed – Rasaasa News
Jun 27, 2011 Warar Dheeraad ah oo Aan ka Helay Dilkii Cabdi Cabdulahi Muxumed
Xogo hor leh oo aan ka helay Nairobi, kuna saabsan dilkii Cabdi Cabdulahi Muxumed, ayaa waxay sheegayaan in ruuxii ugu dambeeyey ee Marxuun Cabdi Cabdulahi ay wadhadleen uu ahaa Abti-doon ama Maadey, hal saac ka hor inta uuna Marxuunku dhiman.
Booliska dalka Kenya, ayaa baadhid ay ku sameeyeen Mobile Numberkii uu lahaa Marxuunku, ka helay Telefoonka Numberka guriga Maadey. Waxaa maqan oo aan wali la helin Mobile-kii Marxuunku watay, nasiib wanaag Boolisku waxay ka heleen Numberkii Marxuunka Afadiis, oo degan xerada Qaxootiga ee Dhadhaab.
Booliska ayaa waxay afada u cadeeyeen in Numberka Abti-doon, uu ahaa Numberkii ugu dambeeyey ee ay xidhiidhaan, Hal Saac ka hor inta uusan dhiman. Kolkii uu Boolisku cadeeyey Numberka iyo dalka laga leeyahay ayay ehelka marxuunku heleen in uu yahay Numberka Abti-doon, waxaana kaliya oo la isweydiinayaa doorka uu ku lahaa Abti-doon.
Waxaan la ogayn in Booliska Kenya ay isku taxalujin doono raadinta gacan ku dhiiglayaasha dilka gaystay iyo in kale. Kenya iyo UK, waxaa ka dhaxeeyo xidhiidh iskaashi oo dhinac walba ah, waxaana suurta gal ah in Kenya ay la wadaagto baadhista Booliska Ingriiska [Scotlan yard].
Dhinaca kale Afadii uu ka dhintay marxuunku ayaa waxay sheegtay in xiligii la la,aa ay u yimaadeen xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, waxayna u sheegeen in ayna faafin maqnaanshaha Cabdi Cabdulahi Muxumed.
Waxay u sheegeen in loo malaynayo in ay Ethiopia afduubtay, inta laga ogaanayo arintana ayna cidna u sheegin.
Magac maskiin lagama ah ee Marxuun Cabdi Cabdulahi Muxumed waxaa uu ahaa Wayteen ka ah reer Bayle, dhimashadiisii ka dibna waxaa si qurux badan u xabaashay beeshiisa, ka dib kolkii ay kooxda Jwxo-shiil, diideen in Maydka ay ka qaadaan Isbitaalka Kenyata.
Wali si dhab ah loomahayo sababta keentay in ay kooxdu, goyso gacanteeda midig, wararse xam xam ah ayaa sheegaya in uu jiray khilaaf marxuunka iyo kooxda u dhaxeeyey.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa caada u leh dilalka Qarsoon, rag qaali ah oo ka mid ahaa ururkii ONLF-na dilay dilay oo ka dhexmaray Ethiopia.
Kooxdu waxay hore uga dhexmartay UWSLF, halgankii ay kula jirtay Ethiopia, iyada oo ka dishay ururka 35.
Dr. Dolal oo ahaa Aabihii ururka ONLF iyo ku xigeenkiisii Jamal Odal [Jamaal Dheere] ayey laba todobaad oo isku xiga dileen.
Saxiix nabadeed ee ONLF iyo UWSLF ay la galeen Ethiopia, ayey kooxdani bilowday dilal ay kula kacday Cabdulahi Dheer, oo ahaa nin ganacsade ah oo nabada taageeray deganaana Kenya.
Waxaa xigay Kamas Dhabar, oo ka tirsanaa isla kooxda Jwxo-shiil, ka dib kolkii la isku qabtay arimo dhaqaale.
Waxaa xigay Sheekh Maxamed Dubad, ahaana xubin sare oo ka tirsanaa ururuka UWSLF ee nabada qaatay.
Waxaa kale oo jiray 19 ruux oo ay kooxdu ku dishay meela kala duwan oo dalka Kenya ah.
Ethiopia ma fuliso dilalka noocan ah, waxaana ugu dambaysay 1996, xiligaas oo ay Kornay Axmed sheekh Muxumed Iraad ku dishay Muqdisho.
Intii xiligaa ka dambaysay Ethiopia wali laguma arag falal noocan oo kale ah, laakiin waxaa lagu yaqiin in ay samayso afduub amaan ah, oo ay ka fuliso maamul gabaleedyada Somaliyeed, arinkaas oo haatan xiligiisi dhamaaday.
Waxaa xaqiiq ah in kooxda dhaxeeda xili dhaw uu ruuxba ruux ka takhalusi doono, hadii ay sidan ku sii socdaan.